Iindaba -Imicimbi emine efuna ingqwalaselo kusetyenziso lweefowuni eziphathwayo zokukhusela imiqondiso kwinkomfa
Imicimbi emine efuna ingqalelo ekusebenziseni iijammers eziphathwayo ukukhusela imiqondiso kwinkomfa
Okwangoku, zininzi iintlobo zeempawu zemfonomfono eziphathwayo kwintengiso, kodwa zahlulwe zangamacandelo amabini: oomatshini bobunjineli kunye noomatshini abaqhelekileyo. Njengoko igama libonisa, oomatshini bobunjineli bahlala besetyenziselwa iimfuno eziphezulu kunye neeprojekthi ezikumgangatho ophezulu. Iimpawu zabo zifuna ukusebenza okuzinzileyo, ukuhambelana nomsebenzi ngokungqinelana nendawo yonomathotholo kwindawo, kunye nokusebenza kweeyure ezingama-24 ngaphandle kokuphazanyiswa. Iifowuni eziqhelekileyo zizixhobo ezisetyenziswa ngokubanzi okwexeshana ixesha elifutshane. Ukusebenza kwabo akwaziwa, okunokuchaphazela uphawu lwabanye ukuba basebenzise iselfowuni, kwaye inokuthintela indawo ofuna ukuyivimba kodwa ayinakuphunyezwa ngokufanelekileyo.
Ngokwesiqhelo ababaninzi abantu kwigumbi lokuhlangana, kwaye abantu bahlangana kuphela xa bafuna ukubanentlanganiso, kwaye kwangaxeshanye, kukho imeko apho iifowuni eziphathwayo zihlangana khona. Ngexesha lentlanganiso, kunokwenzeka ukuba le fowuni yalo mntu izakukhala ixeshana, kwaye loo mntu uya kukhala ithutyana. Ke ngoko, kubaluleke kakhulu ukufaka ikhuselo lamagumbi enkomfa. Kwelinye icala, isika ukuphazamiseka kweselfowuni kwintlanganiso, kwaye kwelinye icala, inokunceda ngokugcina imfihlo yomxholo wentlanganiso.
Ke zithini izilumkiso ekukhetheni iijammers eziphathwayo zokukhusela imiqondiso kumagumbi eenkomfa?
1. Khetha isixhobo sokukhusela kumenzi oqhelekileyo, ngokukhethekileyo nengxelo yovavanyo ekhutshwe liSebe lezoKhuseleko loLuntu;
Okwesibini, ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kwesiphumo sokukhusela, zama ukusebenzisa oomatshini bobunjineli, njengoomatshini abaphathwayo, abanokuvulwa xa kufuneka, kwaye banokuvalwa emva kokusetyenziswa;
3. Phambi kofakelo, zama ukuba neengcali kuvavanyo lwesiza kwiiselfowuni ukuze zikhuseleke ngaphandle kokuphazamisa abanye okanye ukuchitha umbane;
Okwesine, uhlawula ngento oyihlawulayo. Xa uhlahlo-lwabiwo mali luvumela, zama ukukhetha izixhobo ezikumgangatho ophezulu, ezinokonga uninzi lweengxaki ezingeyomfuneko.